Savorivory teo Analakely :: Vaky ny adin’ireo mpivaro-kena sy mpivarotra legioma • AoRaha
Savorivory teo Analakely Vaky ny adin’ireo mpivaro-kena sy mpivarotra legioma
Ady tsena, ady an-tsena. Vao maraina dia efa nisavoritaka teo Analakely, eo anoloan’ny toeram-pivarotan-kena, eny amin’ny “Pavillon”. Voalaza fa niparitaka eran’ny tsena fivarotana legioma sy hena ny entan’ireo mpivarotra legioma. Ny fananganan’ny fikambanan’ ny mpivaro-kena trano vy iray hivarotana eo amin’ny toerana nisy iretsy farany no antony niteraka ny savorovoro. Nomen’ny kaominina
Antananarivo renivohitra (Cua) an’iry fikambanana iry ny toerana, ka very ireo mpivarotra legioma am-polony.
“Nanorina trano vy teo amin’ny toerana fivarotanay izy ireo, ny alahady alina, nefa ny entanay nipetraka teo. Tsy nisy akory ny fampilazana mialoha fa naparitak’izy ireo ny entanay. Itony voatabia anaty kesika itony noraofina tamin’ny tany avokoa”, hoy i Fara, iray tamin’ireo mpivarotra lasibatry ny faha- potehan’ny entany.
Araka ny fantatra, nisy ihany koa ireo mpivarotra very vola nandritra izany. “Manodidina ny roa hetsy ny volako no napetrako tao handoavako vidin’ny entana nalaiko ny ampitso izay very daholo. Manginy fotsiny ireo entana maro be, toy ny tongolo, ny ovy sy ny maro hafa”, hoy Razafindrangita Hélène, mpivarotra legioma iray hafa.
Mandà ny fananganana ny trano vy ireto mpivarotra legioma satria ambaran’izy ireo fa mibahana ny toerana tokony hisy azy ireo izany. Ny fikambanan’ny mpivaro-kena, tompon’ny toerana vaovao indray, efa nanamarina ny fisian’ny fampilazana mialoha an’iretsy mpivarotra namany. “Efa nanao fangatahana tany amin’ny Cua izahay. Nisy ny fampilazana ny ampahany tamin’ny mpivarotra fa izy ireo no mety tsy nampita ny hafatra. Misy toerana hafa homena ireo mpivarotra ireo, toy ny etsy Ambodifilao sy eto amin’ny manodidina ihany”, araka ny fanazavan-dRakotonandrianina Narcisse, filohan’ny fikambanan’ny mpivaro-kena.
Nilaza indray ny avy ao amin’ny Cua fa izay manara-dalàna ihany no eken’izy ireo. “Nangataka tamin’ny CUA ny mpivaro-kena hanitatra ny tsenany dia nekena . Noesorina sy nafindra toerana hafa ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ary niantohan’ny mpivaron-kena ny entany simba teo”, hoy ny tompon’ andraikitra eo anivon’ny Boriborintany voalohany.
Fitsaboana voajanahary :: Mampitolagaga ny fanomezam- pahasoavana ananan-dRavao, mpanotra
Fisaonan’ny mozika malagasy :: Nodimandry i Parfait Lalanirina, namorona ny tarika Zopanage sy VHF
Trafikan’olombelona Zaza, 4 taona, votsotra teo am-pelantanan’ilay lehilahy nokaramaina iray tapitrisa ariary
Fitoriana noho ny fanolanana Nafana ny raharaham-pitsarana an’i « Ramose » sy ilay ankizivavy mpianatra
Fitsaram-bahoaka Olona enina maty novonoina teo ankalamanjana
Fahafatesana relijiozy Mompera iray maty nivarina tany anaty tevana